घरेलु काममा लगाएका थिए कार्की परिवारले ६ वर्षदेखि तलब नदिएकै कारण मुना ह त्याका ण्ड! – PathivaraOnline
Home > समाचार > घरेलु काममा लगाएका थिए कार्की परिवारले ६ वर्षदेखि तलब नदिएकै कारण मुना ह त्याका ण्ड!
पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीको श्रीमती मुना कार्कीको ह’त्या गरेर आ’त्मह’त्या गरेको भनिएका विजय चौधरी दाङ लमहीका हुन् । विजयको गाउ“मा स’न्नाटा छ, छोराको श’व बुझ्न ५० वर्षीय बाबु मंगलबार बिहानै काठमाडौं हिडेका छन् भने ४५ वर्षीया बि’रामी आमालाई घ’टनाबारे जानकारी नै छैन । पूर्वसचिव कार्की दाङको लमहीस्थित प्रगन्ना सिँचाइ आयोजनाको कार्यालय प्रमुख भएकाले विजय काठमाडौं आउने सं’योग जु’रेको हो । कार्कीले पहिले लममहीका आसिवन चौधरीलाई घरेलु का’मदार बनाएर काठमाडौं ल्याएका थिए ।
६ वर्षअघि कार्की नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख बनेको वेला आसिवनलाई प्राधिकरणको लमहीस्थित शाखामा जागिर ल’गाइदिए । आसिवनले पनि गुन तिर्न विजय चौधरीलाई कार्कीको घरमा घ’रेलु का’मदार बनाइदिएका हुन् । आफन्तहरूका अनुुसार ६ कक्षासम्म पढेर छाडेका विजय का’मदारको रूपमा कार्कीनिवासमा प्र’वेश गर्दा विजय १६ वर्षका थिए ।
विजयलाई कार्कीको घरमा स’रसफाइलगायत काम लगाइएको थियो । तर, कति पैसा पाउने भन्ने नि’र्धारण गरिएको थिएन । जागिर अथवा पैसा केही नपाएपनि छोराले आफुहरू सँग कुनै गु’नासो नगरेको पनि उनले बताए । काम मिलाइदिएका आसिवनले पनि विजयको पारीश्रमिक नि’र्धारण नगरिएको बताए । चौधरी परिवारका अनुसार विजय अघिल्लो वर्ष तिहारयता घर आएका थिएनन् । तर, बाबुआमासँग फोनमा कुराकानी भइरहन्थ्यो । साता दिनअघि मात्रै उनले बुबा जानकीलाई फोन गरेर कार्की परिवारका लागि तोरीको तेल र मसुरोको दाल पठाइदिन भनेका थिए ।
‘उसले काम गर्ने घरको लागि तोरीको पाँच लिटर तेल र पाँच किलो मसुरोको दाल पठाइदिन भनेको थियो,’ जानकीले भने, ‘छोरासँगको अ’न्तिम कुराकानी नै त्यही थियो ।’ कार्की सरले ड्राइभिङ लाइसेन्स नि’कालिदिन लागेको खबर पनि त्यतिवेला छोराले सुनाएको जानकीले बताए । विजयले ह’त्या गरेर आ’त्मह’त्या गरेको पत्याउन अ’प्ठ्यारो परिरहेको आफन्त र छिमेकीहरू बताउँछन् । बोल्नसमेत लजाउने विजयले यत्रो अ’पराध गरेको भनेर प’त्याउन नसकेको ठूलीआमा अनारकली चौधरीले बताइन् । ‘कहिल्यै झ’गडा गरेको थाहा पाइएन ।
ऊ त धेरै बोल्दा पनि बोल्दैनथ्यो,’ अनारकलीले भनिन् ‘यत्रो घटना गरायो भनेर कसरी प’त्याउनू ? तर प्रमाण जे बोल्छ, हामीले मान्नै पर्‍यो’ लमही–२ का वडासचिवसमेत रहेका स्थानीय रामभजन चौधरीले पनि गाउँमा छँदा विजय शान्त स्व’भावको भएको बताए । ‘म पनि छिमेकी नै हुँ। उसले कहिल्यै झ’गडा गरेको थाहा पाइएन । तर, त्यति ठूलो घ’टना गरायो भन्ने सुन्दा पत्याउन गा’ह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने । विजयका २० र १८ वर्षका दुई भाइ छन् ।नया पत्रिकामा खबर छ ।
यस्तो दुःखद खबरः भाइरल ज्वरोलाई कोरोना ठानेर आत्मह,त्या
लक्की शेर्पा नेपाल छाडेर भागेपछि…
दिनभर चक्रपथ रातपरेपछि नागढुंगा कट्ने ‘रहस्यमयी’ बस ! प्रहरीकै होस उड्ने यस्तो रहेछ कर्तुत!